Dawladda Turkiga oo Maxkamad soo Taagtay Joornaaliisteyaashii ay Xir Xirtay (VIDEO) - Hablaha Media Network
Dawladda Turkiga oo Maxkamad soo Taagtay Joornaaliisteyaashii ay Xir Xirtay (VIDEO)
HMN:- Dowladda dalka Turkiga ayaa waxay Maxkamadda Magaalada Istanbul horkeentay ugu yaraan 21 Suxuufi, kuwaas oo qayb ka ah jawaabta adag ee Dowladdu ka bixinayso afgambigii fashilmay ee dalkaasi ka dhacay.
Tallaabadaan ayaa waxay ka dhalatay kadib markii Dowladda Turkiga ay soo saartay warqad digniin ah oo lagu soo xirayo in ka badan 90 Suxufi.
Laamaha amamanka dalka Turkiga, ayaa baadigoob culus ugu jira 20 Suxufi, kuwaa oo qaarkood la hadalhayo inay isaga carareen dalkaasi.
Dowladda Turkiga ayaa waxay toddobaadkii hore amartay in la xiro in ka badan 130 xarumo warbaahineed, oo isugu jira teleefishino, wargeysyo, idaacado iyo wakaalado warar.
Mareykanka ayaa waxa uu walaac xoogan ka muujisay xaaladda dalka Turkiga, ka dib gacanta adag ee Xukuumadda Ankara u adeegsaneyso dadka lala xiriirinaayo afgambigii 15-kii bishaan ka dhacay dalkaasi.